Fanomezam-pahasoavana ho an'ny Sandals Foundation Princess Margaret Hospital Pediatric Ward
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Fanomezam-pahasoavana ho an'ny Sandals Foundation Princess Margaret Hospital Pediatric Ward
Antigua & Barbuda Breaking News • Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana Barbados • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Grenada Breaking News • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • fanorenana • Resorts • Vaovao Mafana Saint Lucia • Tourism • Fifanarahana Travel | Torohevitra momba ny dia • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Sandaly Foundation Fanomezana hopitaly Princess Margaret
Ireo mararin'ny Departemantan'ny Pediatric ao amin'ny Hopitaly Princess Margaret any Nassau, Bahamas, izao dia hozahana sy hotsaboina miaraka amin'ny fitaovana manara-penitra noho ny fanomezana be dia be avy amin'ny Sandals Foundation.
Ireo fitaovana, izay mitentina 13,000 $ US, dia hanompo ankizy iray arivo (1,000) eo ho eo izay mampiasa ny tobim-pitsaboana isan-taona.
Niresaka nandritra ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny talata 3 martsa ny Dr. Marcia Bassett, Lehiben'ny Departemantan'ny Pediatrics ao amin'ny Hopitaly Princess Margaret, fa "ny fanomezana dia hanatsara ny asan'ny Pediatric Ward sy ny fikarakarana omena ireo marary sy ny fianakaviana. " Dr. Bassett dia faly tamin'ny fanomezana izay dodona ny ekipan'ny mpitsabo hiasa.
“Tena faly izahay fa nifidy anay i Sandals mba handray ity fanomezana ity. Ireto dia entana tena ilaina ary tsy andrin'ny ekipa ny manomboka mampiasa azy ireo. ”
Ireo fitaovam-pitsaboana vao noraisina dia ahitana «Odiam-bolo nitazona tanana handrefesana ny habetsan'ny oxygen ao amin'ny ra (pulse); fanaraha-maso Vital sign miaraka amin'ny fijoroana sy kojakoja hanampiana ny dokotera hanamarina ny famantarana ny marary tsirairay, hanoratra marina ny fanovana ny toe-pahasalaman'ny marary ary hanitsy ny fanafody mifanaraka amin'izany mba hanomezana fikarakarana tsara indrindra; ary Scale amin'ny seza nomerika finday izay mamela ireo marary manana fetran'ny finday na ara-batana, tsy mahay mandanjalanja na tongotra malemy azo lanjaina rehefa mipetraka.
Novidiana koa ny Natus Phototherapy Blanket ary hoentina any amin'ny hopitaly amin'ny herinandro ho avy. Ny rafi-pitsaboana phototherapy mivaingana dia hanolotra zaza vao teraka miaraka amin'ny jaundice ny fitsaboana tsara indrindra ary manomboka amin'ny fiainana.
Heidi Clarke, Tale Mpanatanteraka ao amin'ny Sandals Foundation dia nilaza fa ny Foundation dia manome voninahitra fa afaka manohana ny fikarakaran'ny fianakaviana izay omen'ny hopitaly.
"Amin'ny maha-Foundation izay manompo an'i Karaiba sy ny mponina ao aminy, dia mijery hatrany ireo programa manome fampandrosoana maharitra ny vondrom-piarahamonina Karaiba izahay."
Ny hopitalin'ny Princess Margaret, hoy hatrany i Clarke, dia "manome filàna miavaka amin'ny alàlan'ny fanolorana fidirana ara-drariny amin'ny fitsaboana. Faly be izahay fa afaka nanampy an'io hopitaly io hanompo ny vahoaka. ”
Ny Pediatric Ward sy ny fitaovany dia simba nandritra ny fandalovan'ny rivodoza Irma tamin'ny taona 2017. Ny fanomezana dia mifanaraka tanteraka amin'ny fandaharanasa fanentanana roa lehibe an'ny Sandals Foundation - fampandrosoana ny vondrom-piarahamonina sy fanampiana ny voina.
The Sandals Foundation dia fikambanana tsy mitady tombom-barotra navoaka tamin'ny volana martsa 2009 mba hanampy Sandals Resorts International manohy manisy fiovana amin'ny fiainan'ny olona ao amin'ny faritra iasany.